Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem]
1 Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 28th March 2010, 11:38 pm
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ စက်မှာ ဖြစ်တာပါ ... သူက သူ့ Drive တွေ ဖွင့်လို့ မရတော့လို့ တဲ့ ... အဲဒါ လုပ်ကြည့်ပေးပါဦးဆိုလို့
သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တာ .. ကျွန်တော် သွားကြည့်တော့ သူ့ Drive တွေ က ဖွင့်လို့ ရနေပြန်ရော .. အဲဒါနဲ့ မဟုတ်ဘူးတဲ့
အဲဒါ ခဏ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ဆိုတော့ ခဏ စောင့်လိုက် တာ .. ဖွင့်လို့ မရတော့ ပြန်ဘူး ဗျာ ...
ဖြစ်တာက Drive ကိုဖွင့်ရင် ဖြစ်နေကျလို explorer နဲ့ ဖွင့် လို့လည်း မရဘူး .. Double click နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်း ထူးမခြားနားပဲ .. ဘာမှ လည်း
မပြဘူး .. မျက်တောင်တချက်ခတ်သွားတယ် ...ပြီးတော့ဒီအတိုင်းကြီး ...
အဲဒါ ကျွန်တော်လည်း အထဲ က ဘာတွေ များ ဖြစ်နေလဲ ပေါ့ ... တခြား ဟာတွေ ကလည်း ထွေထွေ ထူးထူး မဖြစ်ဘူး ...
ကျွန်တော်တို့ Gpedit.msc ကနေပြီးတော့သွားပြင်မယ် ဆိုတော့ လည်း သူ က + ကလေးတွေ ကနေပြီတော့ ဖွင့် မယ်ဆိုရင်
အဲဒါတွေ ကိုလည်း ဖွင့်လို့ မရဘူး ဗျာ ... Virus လားပေါ့ ....အဲဒါနဲ့ Antivirus နဲ့ စစ်ကြည့်ခိုင်းလိုက် တယ်.. စစ်လည်း ကြည့်ပြီးရော
ထူးမခြားနားပါပဲ ... အဲဒါနဲ့ Window နဲ့ ပဲ ညှိနေသလား ဆိုပြီးတော့ Window ကိုပြန်တင်ကွာ ဆိုပြီးတော့ ပြန်တင်တယ် ...
Window XP ရိုးရိုးပဲ တင် တာ ပဲ ... ဒါပေမယ့် နောက် Window မှာလည်း ဆက်ဖြစ်တယ် ဗျာ ... ဘယ်လို လုပ်ရမယ်မသိဘူး
ဖိုရမ်ထဲ က ဆြာ တွေ ကိုပဲ အကူအညီ တောင်းရမှာပဲ ...အဲဒါ ဘယ်လို ရှင်းရမယ်မသိဘူး နော ်... ပြောပြ ကြပါဦး ...
2 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 29th March 2010, 12:00 pm
ကျနော်ထင်တာတော့ virus ကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်
ဒါမှမဟုတ် Drive ကို
အဆင်ပြေသွားရင် လဲ ဘယ်လိုအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာပြောဦးနော်
3 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 29th March 2010, 12:51 pm
ကျွန်တော် နည်းနညး် ပြောကြည့်မယ်နော်
Drive က sata လာ IDE လာ အရင် သိဖို့ လို ပါတယ် တကယ်လို့ sata ဆိုရင် COMS Setup မှာ ၀င် ကြည့်လိုက်ပါ
IDE Contollar မှာ RAID ဖြစ်နေရင် လည်း ဖြစ်တက်ပါတယ် အဲ့ဒါ ကို IDE ပြန်ရွေးပေးလိုက် ရင် လည်း ရတက်ပါတယ်
နောက် ြ့ပီး solakoko ပြောသလို hardisk ကို format ရိုက် ပြီး windows ကို ပြန်တင်လိုက် ပါ နောက် ပြီး windows ကို တင်ြ့ပီး တာနဲ့ antivirus ကို တင် ြ့ပီး အရင် စစ် လိုက်ပါ ပြီးမှ software တွေ ကို ပြန်တင် ကြည့်ပါနော်
4 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 29th March 2010, 4:25 pm
အင်း ဗျာ အဲဒီ့ လို ကလေး ပဲ စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် ... Drive ကတော့ SATA ပဲ ဗျ .... မရရင်တော့ ဒီကောင့်ကို Format ပဲ ရိုက်ခိုင်းကြည့် ရမှာပဲ .. ကျေးဇူး အထူးဗျိုး ... တခြားသူတွေ လည်း လာပြီးတော့ ရှင်းပြကြပါဦးဗျာ ..
5 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 29th March 2010, 7:40 pm
ကျွန်တော်မှာအခုဖြစ်နေတာကတော့ CD drive လေးပျောက်သွားပြီ
ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမသိတော့ဘူး ဟီး hardware ဆရာများလုပ်ပါဦး
6 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 29th March 2010, 7:52 pm
My computer>r-click>manage>device manager>မှာ ညာဘက်က CD-ROM က disable ဖြစ်နေရင်
7 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 29th March 2010, 7:59 pm
လုပ်ပြီးပါပြီ properties မှာကြည့်တာ လိုင်း39 ဆိုတာမှာ error တက်နေတယ်
8 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 31st March 2010, 11:38 am
ကျွန်တော် ပြောထားတဲ့ အတဲ မှာ ရော ၀င် ကြည့်ပြီးပြီးလာ ညီ မင်း drive က ဘာ အမျိုးအစားလဲ အခု လိုဖြစ်တာ ကြာပြီး လာမသိဘူး drive ကို အခြားစက်မှာရော စမ်းကြည့်သေးလာ စမ်းလို့ အဲ့းဒီ error ပဲ တက် ရင် တာ့ drive က ဖြစ်တာ နေမှာ ပါ
9 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 31st March 2010, 7:31 pm
ကျွန်တော်ဟာကတော့ sata ပါ window အသစ်ပြန်တင်လိုက်ရင်တော့ကောင်းသွားမယ်ထင်တယ် ဟီး
10 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 2nd April 2010, 8:28 pm
စမ်းသပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ Bios ထဲကိုဝင်ကြည့်ပါလိုက်ပါလား
Bios ထဲမှာ Detect သိတယ်ဆိုရင်တော့ Windows သာပြန်တင်လိုက်ပါအစ်ကိုရယ်
11 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 2nd April 2010, 8:53 pm
12 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 10th April 2010, 10:05 am
ဟို တစ်နေ ့က ကိုထက် ပြောတာ နဲ ့ဒီ POST ကိုရေးလိုက်တာပါ...
သူက Drive တွေနဲ့Folders တွေကို Double-click နဲ ့ဖွင့် ရင် Open နဲ ့မတက်ဘဲ Explorer နဲ ့နောက်ထက် Windows တစ်ခု ထပ်တက်လာတယ်ဆို လို ့ပါ... အောက်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်းလုပ် ကြည့်လိုက်ပါ..ကျွန်တော်ရဲ ့search နဲ ့ပွင့်နေတဲ့ဟာတော့ရတယ်ဗျ.
Run မှာ regedit လို့ ရိုက်ပြီး Registry Editor ကို ၀င်လိုက်ပါ။ အောက်ပါ Tree အတိုင်းသွားလိုက်ပါ။
shell ကို click ပြီး ညာဘက်ကပေါ်လာတဲ့ သူ့ရဲ့ Default ဆိုတဲ့ item ကို D-Click နှိပ်ပြီး Value ကို none လို့ရေးပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို ရင်အဆင်ပြေသွားပြီ လို ့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Drive ကို ပြောင်းမိလို့ search နဲ့ ပွင့်နေရင်တော့ဗျာ Run မှာ အောက်ကစာတွေကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ပြီးရင် Enter နှိပ်လိုက်ပါ။.
အဲလိုရေးလိုက်ရင် အောက်ကပြတဲ့အတိုင်း Alert Box လေးပေါ်လာပါမယ်ဗျာ။ Ok ပေးလိုက်ပါ။
13 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 10th April 2010, 7:05 pm
ကိုထက်ပြောတဲ့ အပေါ်ဆုံးက ပြသနာက virus ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.....open နဲ့ဖွင့်လို့
မရဘူး..right click>explore နဲ့ဖွင့်မှရတယ်....အဲ့လိုမျိုးမှလား....antivirus ကဘာနဲ့စစ်တာလဲ
ကိုမင်းကို ရေ အကိုက ဘာOS သုံးလို့လဲဗျ...ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကြုံဘူးတယ်...ကျွန်တော်ကwindows 7မှာအကို....
cd drive ပျောက်တာလေ.....ကျွန်တော့်တုန်းက recovery ပြန်လုပ်လိုက်ရတယ်....
14 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem] on 10th April 2010, 7:13 pm
အဲကျွန်တော်မှာလည်း window7 ဗျ
မေ့နေတယ် recovery ပြန်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်က window ပြန်မတင်ချင်လို့
15 Re: Drive တွေဖွင့်မရလို့ .. [Problem]